Malunga nathi -ipandawill technology Co., ltd
Imijikelezo yePandawillliqela elinamava ngaphezulu kweminyaka eli-10 ekwenziweni kwe-PCB nakwicandelo lokuvelisa elektroniki. Ngommandla wemveliso opheleleyo we-2,000 yeemitha zesikwere kunye nabasebenzi abanezakhono ngaphezulu kwe-500, siyakwazi ukukunika ukwenziwa kwePCB kunye nendibano ukusuka ekujikeni okukhawulezayo, umfuziselo kwimveliso yevolumu.
Umgangatho yeyona nto iphambili kuthi, yindlela esisiseko yokujongana nayo yonke imiba yokuphatha idatha, izinto zokwenza imveliso, ubunjineli, ukwenziwa kunye nenkxaso yezobugcisa esiyibonelelayo. Siyi-ISO9001, i-ISO 14001 yamkelwe, i-UL iyaqinisekiswa. Yonke imveliso ilandela imigangatho ye-IPC kwaye ithelekise iimfuno zakho zesicelo kwaye zonke izinto ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo zikwelona nqanaba liphezulu lihlawulelayo.
Ngaphandle komgangatho, iindleko zihlala zizezona ziqwalaselwa kakhulu. Iinkonzo zethu ziya kukuvumela ukuba ube ngoyena mdlali okhuphisana kakhulu kwintengiso yakho, ngokubambelela kumgangatho wakho, nangokukuzisela umda ngokwexabiso, ukufikelela kumaziko azinikeleyo kunye neemveliso ezizodwa kwilizwe elinokhuphiswano olunamaxabiso. Ukuqonda kwethu okungokwemvelo kokwakhiwa kunye nokwehla kweendleko xa sisenza ibhodi yesekethe kusivumela ukuba sijonge ngaphesheya koqoqosho olulula lokonga isikali kwaye amaxesha amaninzi isiphumo esiqokelelweyo sohlaziyo oluninzi kunokuba nefuthe elihle ngokumangalisayo kwiindleko zizonke. Thetha nathi ubone esinokukwenza ukunciphisa inkcitho yebhodi yakho eqhubekayo.
Sibhetyebhetye kwizicelo zakho. Ngaphandle kwezinto eziqhelekileyo, iteknoloji, ixesha lokukhokelela njl, sihlala sizama ukufezekisa iintlobo ezahlukeneyo zeemfuno kubathengi bethu ukusuka kumzekelo wokujika ngokukhawuleza ukuya kwiindleko zokuvelisa umthamo.
Enkosi kubasebenzi bethu abazinikeleyo abasebenza ngokuzimisela, ngoku sikhonza ngaphezulu kwe-1000 labathengi kwihlabathi liphela. Iimveliso zethu kunye neenkonzo zisetyenziswa kakhulu kwimizi-mveliso, kwezonyango, kunxibelelwano ngomnxeba, kwikhaya elilumkileyo, kwi-Intanethi kwinto kunye nakwicandelo lemoto. Sinombulelo kakhulu ngeli thuba kunye nentembelo evela kumthengi wethu. Ukubuyekeza, sihlala sizama ukuba linyathelo eliphambili kubathengi bethu ngokubonisa iimveliso ezinokuthenjwa ngexabiso lokhuphiswano kunye nexesha elifanelekileyo lokukhokela. Sijonge kakhulu ekusebenzeni nawe.